Shaashaddaan cusub ee shucuurta leh ayaa kuu diyaarin doona filimka Netflix - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo Shaashaddaan cusub ee shucuurta leh ayaa kuu diyaarin doona filimka Netflix - BGR
Shaashaddaan cusub ee shucuurta leh ayaa kuu diyaarin doona filimka Netflix - BGR
Sida haddii Jebinta Taageerayaasha Bad ahaayeen kuwo aan ku faraxsanayn ku filan El Camino: waa filim Breaking Bad taxanaha Jesse Pinkman ee filimka ku dhuftay taxanaha AMC, oo ah markii ugu horreysay ee Netflix the 11 october, durduriyaha ayaa hadda sii daayay trailer cusub oo muujinaya shucuur iyo muuqaal qotodheer qaanso uu dabeecaddaasi la wareegay. inta lagu gudajiro bandhiga.
Waad baari kartaa shaxanka kore, kaasoo ah El Camino - eegid Jesse mar alla markii dambena wuu ka xoreeyay Walter White iyo dhamaan xanuunkii uu ururkani u gaystay Jesse breaking Bad Qaybaha 62.
Shaxanka kore waxaa sixi doona Jesse, oo wareystay wakiilada DEA. Marka aan sidaa sameyneyno, annaga, daawadayaasha waxaan helnaa sawirrada taariikhda Jesse oo dhan ka bixitaankiisii ​​kooxda neo-Nazi.
Waa run in aannaan ka xiiso gelin karin filimka soo socda. Xusuusin ahaan, horey ayaan u helnay halkan ku xusan Aaron Paul, oo ah jilaa Jesse, wuxuu soo jeedinayaa in taageerayaasha ay daawadaan goob laga soo daawado dhacdada 7aad ee xilli saddexaad ee Jebinta Xun (Xaq u leeyahay Hal Daqiiqo ) inta loo diyaarinayo filimka. Wareysi Agoosto 1965 uu la yeeshay New York Times ku saabsan El Camino Aaron sidoo kale wuxuu lahaa tan inuu yiraahdo:
"Waa cutub ka mid ah 'Jabinta Bad' oo aanan garan waayey inaan rabo. Hadana markaan haysto, aad ayaan ugu faraxsanahay inay halkaas jirto. Oo markii aan dhammeeyo akhrinta qoraalka filimka, waxay ahayd jawaab-celintiisa: "uma hadli kari waayo 30 ama 60 sekan. Waan ka lumay fikradayda. Anigoo ah nin ciyaaray ninkaan, aad ayaan ugu faraxsanahay in Vince uu doonayey inuu safarkan iga qaado "
Millie Bobbie Brown, xiddigga filimka 'Stranger Waxyaabaha', ayaa diyaarinaya mashruuc cusub oo loogu talagalay Netflix - BGR